Newcastle United oo dhameystirtay saxiixa Bruno Guimaraes. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Newcastle United oo dhameystirtay saxiixa Bruno Guimaraes.
Newcastle United oo dhameystirtay saxiixa Bruno Guimaraes.
Newcastle United ayaa dhamaystirtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Bruno Guimaraes kaas oo uu qalinka ugu duugay heshiis afar sano iyo badh ah oo uu kaga soo biiray kooxda Lyon .
24-jirkan oo xiran doona lambarka 39-aad ee St James Park, ayaa Magpies ugu dhaqaaqay lacag aan la shaacin, taasoo loo maleynayo inuu ku kacayo 30 milyan ginni.
Guimaraes ayaa noqonaya saxiixii seddexaad ee Newcastle ee suuqa Janaayo, isagoo raacay wadadii Kieran Trippier iyo Chris Wood .
Qiimaha ayaa la filayaa inuu ku filnaado in xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil uu barakiciyo Wood inuu yahay saxiixii labaad ee ugu qaalisanaa Newcastle abid, waxaana ka dambeeya kaliya Joelinton .
“Bruno waa hibo aad u xamaasad leh, wuxuuna ahaa mid ka mid ah bartilmaameedyadayada asaasiga ah sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helo isaga. Waxa uu xoojiyaa kooxda isla markiiba diyaar u ah tartanka soo socda,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maamule Eddie Howe.
“Waxa uu ahaa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican France waxana uu si buuxda uga ciyaara xulka qaranka Brazil sidaas darteed wax shaki ah kama qabo in taageerayaasheena ay ku raaxaysan doonaan daawashadiisa, waxa aanu ku rajo weynahay in aanu ku soo dhawayno kooxda marka uu ka soo laabto waajibaadka xulkiisa”.
Kismaayo (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaallo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka...
Arsenal oo qorsheyneysa inay heshiis cusub ka saxiixato William Saliba, Gabriel...
Wararka Suuqa kala iibisga Maanta: Martinez, Abramovich, Suarez, Kessie, Wijnaldum, Haaland,...
Deg Deg Rooble oo Awood Ciidan lasoo baxay, Hub Aruusi...
WARARKII UGU DANBEEYAY DAGAALKA & RW ISRA’IL OO SIRTIISII LA KASHIFAY.
Manchester United oo guul ka gaartay Brentford Xili Cristiano Ronaldo uu...